Shirkii Golaha Amniga Qaranka oo mar kale dib u dhac ku yimid [Maamul goboleedyada oo aan ka soo jawaabin…] | Sagal Radio Services
Qaar ka mid ah Madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa ka soo jawaabin martiqaadka Madaxweyne Farmaajo u fidiyay, iyadoo Maamulka Galmudug uu shuruud adag ku xiray ka qeyb galka shirkaas.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in Madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa ka cudur daartay shirkan, maadaama uu safaro ku marayo dibadda, iyadoo uu dhowaan gaaray Imaaraadka Carabta, kuna sii jeedo Nairobi.
Madaxda Maamul Goboleedyada Galmudug iyo Jubbaland ayaa ku sugan Nairobi, waxaa la filayaa inuu ku soo biiro Madaxweynaha Puntland oo haatan ku sugan Imaaraadka Carabta, waxaana wararku sheegayaan inay shir kula yeelanayaan magaalada Nairobi Madaxda Beesha Caalamka.
La Taliyaha Amniga Qaranka Cabdisaciid Muuse Cali ayaa horaantii bishan qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Madaxweyne Farmaajo uu Madaxda Maamul goboleedyada ku martiqaaday shirkii Golaha Amniga Qaranka oo dhici doona 19-23 April sida uu ku shaaciyay bartiisa Twitterka.
Shirka Golaha Amniga Qaranka ayaa sanadkii hore labo jeer dib u dhacay, iyadoo Maamul goboleedyada ay diideen martiqaad uu Madaxweynuhu u fidiyay inay shir isugu yimaadaan magaalada Muqdisho.